Banyere ZHENGXI - Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. dị na Qingbaijiang Free Trade Mpaghara nke Chengdu. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 45,608, gụnyere mpaghara ogbako dị arọ nke 30,400 square mita. Ọ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ ọkachamara emeputa nke haịdrọlik presses na China. The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 100 injinia na technicians na ọtụtụ nke mba mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ. Ọ nọgidewo na-enwe mmekorita chiri anya na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mahadum a ma ama na ụlọ ọrụ nyocha maka ogologo oge ma kpebisie ike ịbụ onye ọsụ ụzọ teknụzụ na ụlọ ọrụ igwe eletriki.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 60 tent nke kpọmkwem machining akụrụngwa. Dị ka Japanese oké ọrụ lathe, Vetikal lathe, onyinye-agwụ ike na-egwe ọka igwe, grinder wdg Ọzọkwa na a elu oru otu, ihe karịrị 100 ọkachamara oru mkpara. Ha ga-anwa ike ha niile ịrụ ọrụ dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị nwere onwe ha mgbe-ire ngalaba, saa mbara mgbe-sales ọrụ maka ndị ahịa. N'ime awa 2 ka ị natachara oku ahụ, arụpụtara nsogbu a n'ime elekere asatọ na mpaghara Sichuan yana n'ime elekere 48 na mba niile. Onye injinia anyị ga-enyekwa ọrụ na mba ofesi.
Ahịa Ahịa The Wa
Gaa na osisi ndị ahịa anyị ụwa
Mepụta akara ngosi na ụlọ ọrụ ahụ.
Nye igwe kacha dịrị nchebe, kwụsie ike ma rụọ ọrụ nke ọma.
Paykwụ ụgwọ nkwụghachi, ọnụ ahịa nha anya bara uru, ma mee ka ndị ọrụ, ndị ahịa, ndị na-eketa oke na ndị na-ebubata ya merie mmeri